Salaada Baa Ka Kheyr Badan Hurdada – Wajibad
Salaada Baa Ka Kheyr Badan Hurdada
Baa Ka Kheyr Badan
by Mohamed Abdirahmaan
Ma taqaan Macnaha
”Salaada baa ka kheyr badan hurdada..?
Dhab ahaan waa arin run ah Salaada baa ka kheyr badan wax walbo oo ay naftu Jeclaato, Naftu waxey jeclaata Hawo iyo cisyaan Saladana waa midii hawadaas iyo cisyaankaas nafta ka reebeysay siduu Rabbi (swt) inoo sheegay…
” إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ”
”Salaada waxey reebtaa faxshiga iyo xumaha.”
Dhab ahaan hadii aad aragto adigoo xumaan joogta ah sameenayo ogaaw inay salaadaada wax ka qaldan yihiin dib u sax uguna laabo salaadaada.
”Qofka salaadiisa in la aqbalay waxyaabaha lagu garan karo, waxaa ka mid ah in ay ka reebto waxii xumaan ah oo dhan.”
Waa run Salaada baa ka kheyr badan hurdada iyo wax walbo oo dunidaan saaran Sababtoo ah hurdada waa raacida iyo u raaxeenta nafta balse salaada waa daawada iyo raaxada ruuxda.
Hurdada waa raacida iyo ajiibida nafta waxey rabto balse salaada waa raacida iyo ajiibida rabbi (swt) markuu kuu wacay asagoo kheyr kuugu yeerayo;
”Xayya cala-salaaah, Xayya calal-falaax”
Salaada baa ka kheyr badan hurdada sababtoo ah hurdada wa mawt yar balse salaada waa nuur iyo nololasha ruuxda. Salaada waa u kheyr mu’minka kheyrkana uma soo tooso illaa mu’min mooyaane markuu dhaho mu’adinka ” U kaalaya salaada, u kaalaya liibaanta” waxaa booda oo hurdadii ka toosa mu’minka sababtoo ah mushrik ma tukado, Marka uu kuu yeero mu’adinka wuxu kuugu yeeray oo kuu soo kicinayaa wadadii jannada aad ku gaari laheyd illeen Nabigaﷺ baa inoo bishaareeyay markuu yiri:
” من صلى البردين دخل الجنة”
”Ruuxii dukada labada qaboob jannaduu gali.” (Salaadaha subax iyo Casir). [Bukhaari iyo Muslim]
Sidoo kale xabiibkannaga Muxammadﷺ waxuu yiri:
” لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها”
” Naari ma taabato ruun tukaday ka hor inteysan Qurraxdu soo bixin iyo ka hor inta aysan qorraxdu dhicin.” [Muslim]
Aboowe isku day inuusan ku dhaafin kheyrkaas laguugu wacayo, waxaad daqiiqado yar ku gafeysaa inaad dimmada (ilaalinta ) allaah hesho Rasuulka waxuu yiri Sallal-laahu Caleyhi wasallam.
” من صلى الصبح فهو فى ذمة الله”
” Ruuxii Tukadaa Salaada subax waxuu ku jiraa ilaalinta Allaah.” [Muslim]
Akhii u kac salaada rabbi si aad u hesho kheyrkaas badan, ha ka mid noqon kuwa Rabbi caasiyay oo salaadii subax ka tagay markuu waagii cadaaday oo salaadii daqiiqado la dhaafay usoo kacay iney suuqa aadaan si ay u risqi doontaan ayagoo ku soo caasiyay midkii risqiga qeebinayay Rabbi Jalla jalaaluh.
Aboowe hadi aad dooneysid xasanaad iyo wanaag badan oo aadan awoodin inaad usoo kacdo qiyaamu leyl kugu filan inaad jamaaco ku tukato salada cisha iyo salaada subax Rasuulkaﷺ waxuu yiri:
”من صلى العشاء جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى الفجر فىجماعة فكأنما صلى الليل كله ”
”Ruuxii ku tukadaa salaada Cisho jamaaca (masjidka) waa sidii asagoo tukaday qiyaamu leyl bar ka mid ah habeenkii. Midkii salaada subax jamaaca ku tukadaa waa sidii asagoo habeenkii oo idil salaad u taagnaa.” [Muslim]
Aboowe hadii aad rabto inaad ogaato inaad tahay Munaafiq iyo inaad tahay Mu’min qofba ha weydiin wallaah qofba ha weydin adiga uun is weydii oo fiiri sidaad ku tahay salaada subax iyo cishaha illeen waa labada salaad ee ku adag munaafiqiinta.
Wa billaahu tawfiiq
Wasalaamu caleykum waraxmatullahi wabarakaatuhu
Waxaa idiin so diyaariyay:
Walaalkeen Mohamed Abdi
Saxida Xafaha qoraalka ama axaadiithta iigu soo dir ciwaandaan hoose
———— AMA ————–